I-Semalt: Kungani ama-Spam Amazwana Awubi Futhi Ungawaqaphela Kanjani?
Uma unewebhusayithi yebhizinisi noma ibhulogi, amathuba ukuthi uzobhekana nenkinga yamazwana ogaxekile. Uma udumile kakhulu ibhulogi yakho iba, ukuphawula okungaphezulu kogaxekile kungase kutholakale. Ngeshwa, akukho lutho olungaphezu kokuphoxeka noma ukufaka ama-plugin ambalwa ukuqeda amazwana ogaxekile.
Amazwana, Izinkinga, kanye ne-Trackbacks:
Ngaphambi kokuba siqhubekele phambili, uFrank Abagnale, uchwepheshe ophakeme we Semalt , uchaza lapha umehluko phakathi kwalemigomo emithathu:
Amazwana - Amazwana adalwe uma i-bot noma umuntu isebenzisa indawo yokubeka amazwana ebhulogi yakho ukuveza imibono yakhe noma imicabango yakhe.
Izinkinga - Amaphuzu adalwa ngokuzenzekelayo lapho umuntu exhumanisa okuthunyelwe kuwebhusayithi yakhe - инструкция к креслу няня.
I-Trackbacks - I-trackback yesaziso sezinhlamvu ngabagaxekile abaye babetha ibhulogi yakho futhi benza inqubo ezenzakalelayo yokukucasula ngamazwana ogaxekile
Ngeshwa, ama-trackbacks, ama-pingbacks, namazwana wonke ayingozi kuwebhusayithi yakho, futhi kufanele ulahlwe nganoma yikuphi izindleko.
Kungani amazwana ogaxekile engalungile?
Abanye abakwa-webmasters nama-blogger bazama ukuthelela inani lamazwana futhi baqhubeke bevumela uhlelo lokusebenza amazwana abathola ukuthi ayesemthethweni. Awazi ngisho nokuthi amazwana ogaxekile afinyelele amabhulogi azo futhi azobadala izinkinga.
I-Google nezinye izinjini zosesho ziyahlaselwa ezixhumanini ezimbi..Akubandakanyi amasayithi namabhulogi anezixhumanisi eziphansi noma ezimbi, kodwa kufaka zonke izinhlobo zamawebhusayithi azama ukudala izixhumanisi zawo ezigabeni zokuphawula. I-Google ayithandi amabhulogi noma amawebhusayithi anamazwana amaningi aqukethe ama-backlink kwamanye amawebhusayithi.
Amazwana ogaxekile abonisa ukungabi nokulinganisela nokuqonda. Kuyiqiniso ukuthi imibono yogaxekile ifakazela ukuthi uyakwazi ukuqonda futhi ayikwazi ukulinganisela kahle imibono. Isibonelo, uma unayo iwebhusayithi yezobuchwepheshe bese uthola ukuphawula okuhlobene nezimoto noma imfundo, amathuba ukuthi omunye uzama ukushiya izixhumanisi zakhe endaweni yakho yokuphawula futhi yilokho okumele ushintshe.
Izivakashi zakho zizolahlekelwa ukholo emikhiqizo noma amasevisi wakho. Kusho ukuthi uma othile echofoza ezixhumaneni endaweni yokubeka amazwana futhi eqondiswa okuthile okungahambisani nomongo, angase alahlekelwe ithemba lakhe kumkhiqizo wakho futhi ngeke athenge imikhiqizo namasevisi akho esikhathini esizayo.
Indlela Yokuthola Amazwana Ogaxekile?
Kunzima ukukhomba ukuphawula kogaxekile, futhi amanye amablogi nabaphathi bewebhu bazovuma kuphela inani elikhulu lamazwana nsuku zonke. Kodwa ungakwazi ukukhumbula izinto ezilandelayo:
Ingabe ufuna abafundi bakho bachofoze ezintweni ezingabalulekile? Uma kungenjalo, akufanele uvumele imibono engeyona eyesihloko sakho futhi ayihlangene nezihloko zakho. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukususa izixhumanisi kumawebhusayithi kulawo mazwana, uhlele kancane bese uthola ukuthi zivunyiwe.
Igama langempela ne-ID ye-imeyili kufanele lihlolwe ngenkathi kuvunyelwa amazwana. Qinisekisa ukuthi umuntu usetshenzisile amanye amagama angukhiye kumazwana, kodwa akufanele kube khona igama elingukhiye lokugxila. Kulokhu, ungafaka i-plugin ye-SEO Spammer.
Ingabe ukuphawula okuhlobene noma okuqondile kokuthunyelwe kwakho? Kufanele uhlole kahle uma ukuphawula kuhlobene nendaba yakho noma cha. Asikho isidingo sokuqhubeka uvumela inombolo enkulu yamazwana uma engeyona eyisayithi lakho noma ibhulogi.
Uma kuziwa ekulandeleni imibono yogaxekile, kufanele nje ukhumbule amaphuzu angenhla, futhi kufanele uqiniseke. Amanye amawebhusayithi namabhulogi asebenzisa ama-plugin aqondile ukuze asuse amazwana wogaxekile, njengo-Akismet.